Yini oyaziyo ngeFortnite? - Ukuzijabulisa
Yini oyaziyo ngeFortnite?
Ake sazi ukuthi iyini iFortnite?
Yiziphi izindlela ezihlukile ze-Fortnite
Ithini Indaba Yokwenziwa kwayo?
I-Epic Games' i-Fortnite iwumdlalo wevidiyo eku-inthanethi owashicilelwa ngo-2017. Iza ngezindlela ezintathu ezihlukene zemodi yegeyimu, zonke ezabelana ngokudlala igeyimu okuyisisekelo kanye nenjini yegeyimu: I-Fortnite: Londoloza Umhlaba iyi-hybrid tower defense/ shooter/ umdlalo wokusinda wabadlali abangafika kwabane lapho kumele balwe nezilo ezinjengama-zombie ngenkathi bevikela izinto ngezicupho nezinqaba abangazakha.
uma ufuna umthamo owengeziwe womdlalo ongaba yi-inerest yakho ke sinayo I-DESTINY2 ngawe ohlwini.
I-Fortnite Creative, umdlalo wamahhala wokudlala we-warroyale lapho abasebenzisi banikezwa ukuguquguquka okuphelele kokwakha imihlaba nezinkundla zokulwa, kanye ne-Fortnite Battle Royale, umdlalo wamahhala wokudlala we-warroyale lapho abantu abangafika ku-100 baqhudelana khona umuntu wokugcina omile. Izihloko zokufinyelela kusenesikhathi Save the World kanye ne-Battle Royale zethulwe ngo-2017, kanti i-Creative ikhishwe ngo-December 6, 2018.
Ngenkathi izinguqulo ze-Epic Games 'Londoloza Umhlaba kanye ne-Creative ziphumelele, i-Fortnite Battle Royale ibe yinto yomhlaba wonke esikhathini esingaphansi konyaka, yaheha abadlali abangaphezu kwezigidi ezingu-125, okwenza amakhulu ezigidi zamaRandi ngenyanga, futhi ingenisa imali eyizigidi eziyizinkulungwane ezingu-9 zamaRandi emalini yayo. iminyaka emibili yokuqala.
I-Fortnite: I-Save the World iwumdlalo obambisene nomdlali oqhathaniswa nemvelo lapho abadlali abane basebenza ndawonye emisebenzini eminingi ukuze bafinyelele umgomo owabiwe. Umdlalo wenzeka ngemuva kokuthi isiphepho esinamandla sihlasele umhlaba wonke, sabulala abantu abangamaphesenti angama-98 futhi sishiya abasindile besengozini yamakhoba afana nama-zombies.
Abadlali bathatha indima yabalawuli bezindawo zokukhosela zasekhaya, ukuqoqa izinsiza, ukuhlenga abantu, nokuvikela amathuluzi asiza ekuqoqeni idatha ngesivunguvungu noma ukuyibuyisela emuva. Abadlali bathola izinhlobonhlobo zezinto ezingaphakathi kwegeyimu kusukela kumishini, okuhlanganisa abalingisi abangamaqhawe, isikimu sezikhali nesicupho, nabasindile, konke okungakhushulwa ngolwazi oluzuziwe.
I-Fortnite Creative imodi yegeyimu ye-sandbox efana ne-Minecraft lapho abadlali benenkululeko ephelele yokwenza noma yini ngomdlalo esiqhingini, okuhlanganisa izinkundla zempi, amathrekhi omjaho, izinselele zamapulatifomu, nokuningi.
Abadlali bangathola izinsiza eziyisisekelo ezifana nokhuni, isitini, nensimbi ngokusebenzisa ipiki ukubhidliza izakhiwo ezikhona kumephu. Ukulandela lokho, umdlali angasebenzisa lezi zinto zokwakha izinqaba njengezindonga, phansi, nezitebhisi ngazo zonke izindlela. Izingxenye ezinjalo zokuqinisa zingashintshwa ukuze zifake izici ezifana namafasitela neminyango. Izinto ezisetshenziswayo zinamazinga ahlukahlukene okuqina futhi zingathuthukiswa zibe izinguqulo eziqinile ngokusebenzisa uhlobo olufanayo lwezinto.
Ngemuva kokukhishwa kwe-Gears of War 3 ngo-2011, i-Epic Games yaba negeyimu yangaphakathi eyaholela ekudalweni kwe-Fortnite. Yize bekungesona esinye sezihloko ezikhiqizwe ngesikhathi se-jam, umqondo wokuhlanganisa uhlobo lomdlalo wokwakha, ohlanganisa imidlalo efana ne-Minecraft ne-Terraria, ngohlobo lwegeyimu yokudubula ethuthukisiwe, okuholele ekudalweni kwe-Fortnite.
Ukuthuthukiswa kwe-Fortnite kwehliswe yizinto ezimbalwa, okuhlanganisa ukudluliselwa kusuka ku-Unreal Engine 3 kuya ku-Unreal Engine 4, isu elijulile lokudlala indima ethile ukuze kunwetshwe impilo yomdlalo, kanye noshintsho lwesitayela esiyingcaca sisuka kokumnyama siye ekwakhiweni kwekhathuni.
Ngaphezu kwalokho, i-Epic yayizama ukungena emidlalweni njengebhizinisi lesevisi futhi yafaka ukusekelwa komshicileli waseShayina u-Tencent; ngenxa yalokho, abaphathi abaningana, kuhlanganise noCliff Bleszinski, owayeyingxenye ebalulekile yokuthuthukiswa kwe-Fortnite, bashiya inkampani. Isu likaFortnite lashintshwa ukuze libe indawo yokuhlola ye-Epic yemidlalo njengesevisi, ebambezela intuthuko nakakhulu.
I-Epic ikwazile ukulungiselela ukukhipha i-Fortnite njengesihloko sokufinyelela kwangaphambi kwesikhathi esikhokhelwe ngoJulayi 2017, ngenhloso yokuyinikeza njengesihloko esidlalwa mahhala ngo-2019, konke lokhu ngenkathi iqoqa impendulo yomsebenzisi ukuthuthukisa umdlalo. Umdlalo ophikisana nomdlali wemvelo e-Fortnite Battle Royale waqanjwa ngokuthi Londoloza Umhlaba ngemuva kokwethulwa. Ekugcineni, i-Epic yanquma ukwenza i-Save the World ibe umkhiqizo okhokhelwayo, yawukhulula ngoJuni 29, 2020, ngemva kokuthi ikhishiwe ekufinyeleleni ngaphambi kwesikhathi.
Ngo-Agasti 2017, ngaphambi nje kokukhishwa kwe-Battle Royale, imodi yokulondoloza umhlaba yayisidlule abadlali abayisigidi. I-Epic Games ihlukanise abasebenzi bayo phakathi kwe-Save the World kanye ne-Battle Royale ukuze inikeze ukusekelwa okungcono kuzo zombili izindlela lapho i-Fortnite Battle Royale iba yimpumelelo yezohwebo. Bangaphezu kwezigidi eziyi-10 abantu ababedlale le modi kungakapheli amasonto amabili iqalile, kwathi ngoJuni 2018, ngemva nje kokukhululwa kweNintendo Switch, yayisidlule abadlali abayizigidi eziyi-125.
I-Payday 3 Izobekwa Edolobheni Elichumayo laseNew York
I-Ted 3: Konke Mayelana Nokuvuselela Nokukhansela Ngo-2021!